समथर भूमिको संक्षिप्त वर्णन
वर्तमान नेपालका समथर भूमिका इतिहास जनक, विराट, बुद्ध र सलहेससँग जोडिएको छ । राजा जनकको दरवारमा विश्वप्रसिद विद्वत सभामा बाङ्गो शरिर भएको पुड्का विद्वान अस्टावक्र शास्त्रमा महान विद्वानहरूलाई पराजित गरेको थियो । मिथिला विभूति नारी भारती आद्या शंकराचार्यलाई शास्त्रार्थमा पराजित गरेकी थिइन् । जनकपुर नगरिमा आज पनि ज्ञान कुपनाउको शिक्षण संस्था विद्यमान छ । जुआको खालमा पाण्डवबन्धु सम्पूर्ण सम्पति हारेपछि भएको सहमतिअनुसार राजा विराटको दरवारमा विभिन्न गुप्तनाम धारण गरि १२ वर्ष गुप्तवास बस्नुभएको थियो । शाक्य वंशीय राजा सुधोधनका पुत्र सिद्धार्थ गौतम वोधगयामा ज्ञान प्राप्ति गरि विश्वमा दया, करूणाको सन्देश प्रवाहित गर्नुभएको थियो ।
वर्तमान नेपालको उत्तर–पूर्वस्थित किरात राज्यमाथी तिव्बति शासक आक्रमण गरेपछि राजा शलहेस आफ्नो सेनासाथ किरात राजाको मद्दत गरी आक्रमणकारी तिव्वतीलाई हिमालपारी धपाएको हो । समथर भूमिको पूर्वीय क्षेत्रका बासिन्दा जंगलबाट काठ दाउरा सबै (बावीयौ) ल्याउन जंगल जानुअघि र फर्केपछि राजा शलहेसको पुजा गरिन्थ्यो । मान्यता के थियो भने जंगलका राजा शलहेश हुन्, उहाँले नै जंगलमा हिंसक जनावरबाट रक्षा गर्दा हाम्रो गाउँघरमा वर्षमा कमसेकम एकपटक शलहेशको पुजा गर्ने परम्परा आज पनि छ । सप्तरीकै कटैयाँमा जन्मिनुभएका दिनाभद्री दाजुभाइको विश्वभरिका मुसहर समुदाय आफ्नो इष्ट देवताको रूपमा पुजा गर्दछ अन्य जातजातिका नरनारी पनि दिनाभद्रीको थानमा माथा टेकी आशिर्वाद प्राप्त गर्दछन् ।
समथर भूमिमा दुःखका कारणहरू :
भारतवर्षमा मुगल साशकको उदयपछि त्यहाँका नागरिकहरू माथि नानाथरिका कर मात्र लगाएन तिनका कारिन्दा स्थानीयवासीका जग्गाजमिन हड्पन थाले । मुगल शासनको अवसान र भारत वर्षमा इष्टइण्डिया कम्पनीको उदय तथा नेपालमा शाहवंशी गोरखा राज्यको उदय समकालीन जस्तै छ । इष्टइण्डिया कम्पनीको लक्ष्य किसानको जग्गाजमिन हड्पनुको साटो किशानबाट कर असुल गरी शासकीय खर्च चलाउने र व्यपार विस्तारमा केन्द्रित थियो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट राज्यमाथि नियन्त्रण गसिकेपछि काठमाण्डौघाटी भित्रका राज्यमाथि कब्जा गर्न नांै महिनासम्म नाकाबन्दी गरी नुन र कपासको आपूर्तिसमेत बन्द गरी अधिकार जमाएपछि मकवानपुरको सेन राजामाथि कब्जा गरी समथर भूमिमा प्रवेशको लक्ष्य लिएको थियो भने इष्टइण्डिया कम्पनी नेपालको बाटो भएर तिब्बत चीन मंगोलियासम्म व्यापार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सोही क्रममा गोरखाका राजा र इष्टइण्डिया कम्पनीबिच पटक–पटक युद्ध हुन थालेपछि १८२७ मा पूथ्वीनारायण शाह मकवानपुरका सेनवंशीय राजा भवानीराज सेनले मुगल बादशाहपछि इष्टइण्डिया कम्पनीलाई बुझाउँदै आएको नौं हात खडा दुई हात्ती अन्य कोसेलीका साथै मालवजवी (मालपोत) असुलउपर गरि दिने सर्तसाथ झागाझोली निवासी सेनवंशीय राजाका पूर्वकर्मचारीका पुत्र दिनानाथ अपाध्याय (दहाल) मार्फत इष्टइण्डिया कम्पनीको बेतियामा रहेको प्रमुख समक्ष प्रस्ताव गरेपछि कमजोर भैसकेको सेना राजाको साटो गोर्खाको राजालाई पुरानो बक्यौतासहित मालपोत असुलगरि बुझाउनुपर्ने हात्तीसहितको उपहार सालसाल दिनुपर्ने र काठमाडांैमा ब्रिटिश रेजिडेन्टको कार्यालय खोल्न दिई तिब्बतर्फको बाटो हुँदै व्यापार गर्न दिनुपर्ने सर्त राखेपछि पृथ्वीनारायण शाह इष्टइण्डिया कम्पनीको सर्त स्वीकार गरी मकवानपुरदेखि रौतहटसम्मको मालगुजारी असुल गर्ने अधिकार पाएपछि समथर भूमिमा दुःखको पहाडको सिर्जना हुनलागेको र राणा शासनकालमा विकराल रूप लिएको हो शाह शासक समथर भूमिका किसानको जग्गा हड्पी, जङ्गी र निजमति कर्मचारीको तलब दिन थालेको हो भने राणाशासकहरू समथर भूमिका किसानको जग्गा र जंगल आफ्नो नातागोता कारिन्दा, तावेदारलाई विर्ता दिन थालेको हो राणा ३ सरकार भिम शम्सेरको समयमा रोजगारीका लागि असमदेखि मणिपुर, नागालैण्डसम्म पलायन भएका पहाडी समुदायलाई नेपालमा बसोवास गराउन मोरङ्गको ४५ हजार विगहा जंगल फडानी गराई बसोबास गराउन थालेपछि समथर भूमिमा पहाडी समुदायको बसोवास बढ्दै गएको हो । वि.सं. २०१७ पुष १ गतेपछि कथित राष्ट्रवादको नाउँमा चुरे क्षेत्रको जंगल विनाश गराई भूमिहीनको नाउँमा पहाडी समुदायलाई बसोबास गराउन थालेपछि जनसंख्याको हिसाबमा पनि कतिपय जिल्लामा समथर भूमिका मूलवासी अल्पसंख्यामा पुगेको छ ।
२००६ सालमा कलकतामा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा समथर भूमिमा कामय रहेको विभेदको बारेमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष मात्रिका प्रासद कोइराला अध्यक्षीय भाषणमा गरेको चित्रण निम्नप्रकार छ : तराई खण्डमा खोरीयाफारी गर्ने किसानको हालत पनि उतिकै दुःख लाग्दो छ । औंलो घामपानीको समाना गर्दै बाँझो जग्गा आवाद गर्ने किसान ऋण र चर्काे व्याजको चपेटामा परी भोकभोकै छन् । जग्गा हुने किसानको हातबाट जगा निस्कदै गई सुकुमवासी भएर गएका छन्, यस्ता किसानहरूको जगा राणाशाहीका पृष्ठपोषकहरू सुधखोरीमा मोटाउने पुँजीपतिहरूको हातमा जाँदैछ २–३ महिनामा नै डयोढासवैया ब्याजका चलन तराईमा एउटा मामुलि घटना भैसकेको छ आज जहाँ राणा सरकार तराईमा विघटी र सालसालै पोत बढाउँदैछ । उसकै कारणले विश्वव्यापी मन्दिका समय ९०–९५ सालमा रैतिहरूको जग्गाा पोतपजनी गर्न नहिचकिचाई जिल्लाका जिल्ला विरान पारियो ।
वाजेवराजुको पालादेखिको जग्गा रैतिहरूले आफ्नो परिवारको गहना बेचेर थामने कोसिस गरे नसक्दा जग्गा छोड्न करै लाग्यो आज यस्ता जग्गा गूरूज्यु, थापा काजी, सरदार हत्याएका छन् । साना साना रैति किसानको त कुरै छाडौं हात्ती पाल्ने प्रतिष्ठित मधेशका परिवारले आफ्नो जग्गा जायदाद छाड्नुपर्याे । मधेशमा अत्याचार झन् दोहोरो छ । राणा सरकारको व्यापक साशन कुव्यवस्थाको परिणाम त छदैछ उसमा पर्वते भाषाभाषी हाकिम कारिन्दाहरूको अत्याचार झन् बढ्दो छ । सानासाना अत्तोमा डराई धमकाई त्रास देखाई सुरूवाल लगाउनेहरूले घोती लगाउनेहरूलाई चुसी राखेका छन् । एकै मुलुकका वासिन्दा भएपनि उनीहरूसित देशवासी जस्तो व्यवहार गरिन्न । नत उनीहरूले निजामति जागिर पाउँछन् न त जङ्गगी नै ।
देशलाई एकै सूत्रमा बाँधने राष्ट्रियता जोगाउन एकै देशका वासीहरूमध्ये सामान अधिकार हुन आवश्यक छ । नेपालका राणाशाहीले तराई भेगलाई आफ्नो लुटको क्षेत्र र अर्काे देश जितको जस्तो गरी त्याहाँका वासिन्दासित व्यवहार गरिराखेको छ । तसर्थ स्वाभाविकै छ त्यहाका बासिन्दा समष्टीरूपले आफ्नो देश नमान्नु । आजभन्दा २–४ वर्ष अगाडीसम्म प्रतिष्ठित एवम् शिक्षित तराईवासीलाई सरकारी अडा कचहरीमा बस्नसम्म पाउने सौजन्य प्राप्त थिएन । हलैमा कारिन्दासरह बेन्चमा बस्न दिनु भने भएको छ ।
२००७ को क्रान्तिपछिको अवस्था ः त्यसो त नेपालका प्रमुख दलहरूको स्थापना भारतमै भएको हो ०७ सालको क्रान्तिको प्रवेशमार्ग भारत भएर नेपालका समथर भूमि नै रहेको छ । समथरभूमिबासीको सहयोगमा राणा शाहीको अन्तभएपछि विदेशीएका राजवंशको स्वदेश वापसी भएको र जनताको छोरा मात्रिका प्रसाद कोइराला प्रथम प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । सोबखतदेखि अहिलेसम्म कोइराला परिवारकै चार दाजुभाई पटकपटक नेपालका प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । शाहवंशकै राजा महेन्द्र, विरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र ३५ वर्षभन्दा बढी प्रत्यक्ष शासन गरे ।
राजा महेन्द्रको शासनकालमा हजारौं विघा समथर भूमिका जंगल विनास गराई कथित सुकुमवासीको नाउँमा लाखौं पर्वतेवासीमा जग्गा वितरण गरि समथर भूमिमा बसाइयो तर समथर भूमिका सुकुमवासी, मूलवासी दलित ९०–९५% आदिवासी ७०–७५% र ५०–५५ प्रतिशत अन्य पिछडिएको समुदायका सुकुमवासीलाई किन जगा उपलब्ध नगराएको थियो ? राणाशाही समाप्त भएको ६६ वर्ष पुरा हुन लागेको छ । त्यस अवधिमा पञ्चायती, संसदीय र गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भैसकेको छ । यस अवधिमा समथर भूमिका मुूवासीले के पायो । राणाकालमा २–४ जना सुब्बा र अडिटरको नियुक्ति हुन्थ्यो । आज पनि २–४ जना सिडियो कहिलेकाहि १–२ जना सचिवको नियुक्ति हुने गरेको छ ।
राणाहरूले दुनियालाई देखाउन र आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई समथरवासीलाई १–२ ठाउँमा सुब्बा अडिटर नियुक्ति गरिन्थ्यो आज पनि कथित समाजवादी साम्यवादी दल दुनियालाई देखाउन केही मन्त्री र अन्य पदमा नियुक्ति गरिरहेको छ । शाह र राणाकालमा जङ्गीसेवामा समथर भूमिवासीको प्रवेश निषेधित थियो आजपनि त्यो निषेध कायम छ । समथर भूमिवासीका सन्तान लोकसेवा, न्याय सेवा, विदेश सेवामा प्रवेश किन पाउँदैन ? के वास्तवमै तिनीहरू असक्षम छन् ? या नियोजित प्रपञ्चको शिकार भैरहेका छन् । राणाकालमा दौरा सुरूवाल टोपी शासन सत्ताको प्रतिक मानिन्थ्यो आज पनि टोपी र धोतिको फरक किन भैरहेको छ ?
शिक्षा र समथरभूमि :
नेपालका समथरभूमि शिक्षाको केन्द्रविन्दु थियो । नेपालको कुनै क्षेत्र छैन होला जहाँ समथरभूमिका वासीले शिक्षाका ज्योती जगाएको नहोला । आजपनि पहाडी भू–भागका कतिपय जिल्लाका स्कुलहरूमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षकमा मधेशी शिक्षक कार्यरत छन् । तर, सोही मधेशी सरकारी सेवाका अन्य पदमा किन योग्य हुँदैन ? निजामती, जङ्गगी र अन्य सेवामा बाटो अवरूद्ध भएको देखेपछि समथरभूमिवासी डाक्टरी इन्जिनियरी शिक्षा र सेवातर्फ आकर्षित भएका थिए अहिले सो बाटो पनि किन बन्द हुँदैछ ? समथरभूमिका मुलवासीका सन्तान शिक्षाबाट बिमुख हुनुको कारण शासकवर्गका भेदभाव नीतिको कारण अवसरबाट वञ्चित हुनु हो ।
सामाजिक विभेदको प्रश्न :
मनोवादमा आधारित वर्ण व्यवस्था हिन्दुसमाजको सबभन्दा ठुलो विकृति हो यस विकृतिबाट समथरभूमि मात्र होइन सम्पूर्ण हिन्दु समाज ग्रसित छन् । जसलाई नेपालका मुलुकी ऐन पृष्ठपोषण गरेको थियो । ०७ सालको क्रान्तिपछि हामीले छुवाछुतको भेद मिटाउन र डेढाव्याजको विरूद्ध संघर्ष ग¥यौं । छुवाछुतको भेद मिटाउन हामीले दलित समुदायबाट उच्च वर्गकाले प्रयोग गरिरहेका ईनार, पोखरीमा पानी भर्न लगायौ सहभोजको आयोजना गर्याे । जसमा आफ्नै नातागोताबाट विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । ६६ वर्षपछि पनि समाजिक विभेद किन कायम छ ?
नेपालका समथरभुमी :
केही वर्षअघिसम्म समथरभूमिको गाउँघरमा एउटा उखान प्रचलित थियो ‘उत्तम खेती मध्य व्यापार निर्घिन सेवा भिख निदान” समथरभूमिका ९०% मुलवासी खेती किसानीमा रमाएका थिए । सीमापारीका मजदुर लगाएर बाली लगाउनेदेखि कटनीमड्नी गराउने गर्दथियो । समथरभूमिमा उत्पादन भएको अनाज देशका आवश्यकता पुरा गरि विदेश निर्यात हुन्थ्यो । तरआज समथरभूमिका नागरिक सीमापारीबाट आयातित अन्न खान किन बाध्य भएका छन् ?
अन्तमा, नेपालका समथरभूमिका ८५% मूलवासीको जिविकाको आधार आजपनि खेति किसानी नै हो । बढ्दो परिवार संख्याको कारण भएभरको जग्गा जमिन टुक्राटुक्रामा खण्डित हुँदै गएको छ । खेतिकिसानीको आयबाट परिवार पाल्न अस्मभव भएको छ । उनीहरूका लागि शाह राणाकाल जस्तै जङ्गगीसेवा निषेधित छ भन्ने सरकारी अर्धसरकारी सेवामा प्रंवेश पनि नियन्त्रित छन्, रोजगारीको वैकल्पिक आधार काठमाण्डौंदेखि देशका अन्य भू–भागको साथै भारतलगायत विदेशी भूमीमा श्रम बेचनुपर्ने बाध्यता छ । समथरभूमिका ९०% मूलवासी आ–आफ्नो सन्तानलाई आजको महँगो शिक्षा दिलाउन सक्दैन । शिक्षित युवा पनि योग्यताअनुसार अवसर पाउँदैन । त्यसैकारण आफ्नो सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिलाउनको साटो काममा लगाउन बाध्य भएका छन् । ०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएसँगै हामीले समान विकास र समानताको हक प्राप्तिका लागि राज्यको एकाङ्गी स्वरूप परिवर्तन गरि संघात्मक बनाउनुपर्ने र सामाजिक न्यायमा आधारित शासन व्यवस्था अपनाउन आवाज उठाउँदा हाम्रो मागलाई विखण्डनवाद र साम्प्रदायिकतासँग जोडी ठुकराइयो ।
अपवादबाहेक २६ वर्षदेखि नेपालका शासन व्यवस्थाका नेतृत्व समाजवादी वा साम्यवादी भनाउँदाहरू गरिरहेको छ । ६ दशक लामो राजनीतिक जीवनमा मैले समाजवादको लक्ष्य समाजमा रहेको विभेद समाप्त गरि समान बनाउने र साम्यवादको लक्ष्य समाजमा रहेको विभेद समाप्त गरि साम्य (बाराबरी) बनाउने रहेको पढेजानेको छु । त्यस अवस्थामा देशमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, जातीय र क्षेत्रीय विभेद घटनुको साटो किन बढ्दै गएको छ, समान अधिकारको माग गर्ने समथरभूमिका निहत्था बालवृध महिला सहित नागरिकको टाउकोमा किन गोली हानिन्छ ? यसको जवाफ कसले दिने ? शाह, राणा शासन र समाजवादी वा साम्यवादीको शासन व्यवस्थामा के भेद रहयो ? केही व्यक्ति वा जाति सम्मुनत हुँदैमा समग्र देश र जातजातिय सम्मुनत हुनसक्दैन । समग्र देशवासीको विकास भएन भने देशमा नयाँँ सिराबाट द्वन्द्वको विजारोपन हुने निश्चित छ ।